Codka kalsoonida ma heli doonaa Ra'iisal Wasaaraha magacaaban? | Somalia News
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed said Monday that fighters involved in recent attacks on civilians in the west of the country were receiving training...
Codka kalsoonida ma heli doonaa Ra'iisal Wasaaraha magacaaban?
Sida farriin loo diray xildhibaannada baarlamaanka muujinayso, waxa maalinta berri ah la filayaa in madaxweyne Farmaajo horgeeyo ra’iisal wasaaraha magacaaban baarlamaanka si uu ugu weydiiyo codka kalsoonida.
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54251577original article
Previous articleSawirro: DF oo la kulantay xubnaha beesha caalamka kadib qoraalkii lama filaanka ahaa ee kasoo baxay
Next articleXoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo ka digey dagaal qabow oo cusub